အစ်​ကို​လေး!! - Sekai'Baby Mahaythi Yeollie Exol - Wattpad
Happy HH Day!
~I &#x27;ve Changed the name from Oh Sehun!! လွှတ်​​နော်​
သနားပါတယ်​ ငယ်​​လေး ​နောက်​တစ်​ပိုင်း up ​ပေးပါ​ဗျို့
ငဆယ်လေး သနားပါတယ် ရှေ့လျောက်ပိုသနားဖို့ကောင်းအးယမွ ထင်ရယ်
Reply Get notified when အစ်​ကို​လေး!! is updated Continue with FacebookContinue
HunHan One short Collection
No Effect .Need ya
ဘဲကြည်Boy ( BKB )
Cause Of Love(20+)
" araso araso ထပါပြီ ထပြီ ဆက်မမြည်ပါနဲ့တော့"
အဲ့ဒီ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုကိုပဲ ByunBaekhyun ဆိုတဲ့
ကျွန်တော်က ဘာလဲ ?
"ByunBaekhyun ... သူ့ အခန်းထဲကိုလာခဲ့ပါတဲ့"
သူဆိုတဲ့ CEO parkchanyeol ဆီကိုပေါ့ ...
သူ့အနားမှာပဲနေ သူလိုတာတွေလုပ်ပေး သူ့ရဲ့ personal assistant